China Stainless Channel Bar Ukwenziwa kunye Factory | IHuaxiao
Isitishi esingenasici esingenasici yindawo emise okwentsimbi ende ende, ngokufanayo nebhedi yam. Isitishi esiqhelekileyo sesinyithi sisetyenziswa ikakhulu kwizakhiwo, kwimveliso yezithuthi.
Umthamo weSino Stainless ngentsimbi yeChannel yentsimbi
Ubungakanani : 5 # - 40 #, 40 x 20 - 200 x 100
Ibha yentsimbi engenanto eneenkcukacha Inkqubo yoVavanyo kunye nokuCocwa kweengot
Ukucoca imigca kubandakanya: ukudubula imbabala, ukuhlolwa komphezulu we-infrared, ukubonwa kwesiphene se-ultrasonic kunye nokusila. Njengoko inqanaba lokuphosa ngokuqhubekayo lisonyuka, ukuba ukuqhubeka kokuphosa kunokuvelisa i-billet engenasiphako, umgca wokucoca i-billet ungashiywa.
Insimbi engenasici yaseAustenitic izinzile xa ishushu kwaye ayinakomelezwa ngokucima. Olu hlobo lwentsimbi lunamandla kunye nobulukhuni, ubunzima obuphantsi beqondo lobushushu, akukho magnetism, ukuqhubekeka okuhle, ukwenza kunye nokudibanisa iipropathi, kodwa kulula ukuvelisa ukomisa komsebenzi. Kwangelo xesha, olu hlobo lwesinyithi lune-conductivity esezantsi kakhulu yokuhambisa ubushushu kwaye i-ductile kakhulu kumaqondo obushushu asezantsi, ngoko ke izinga lokufudumeza linokukhawuleza kunaleyo yentsimbi engenasici i-ferritic, iphantsi kancinci kuneqondo lokufudumeza itafile yentsimbi ecacileyo.
Uyilo lomngxunya wokuqengqeleka
Xa uvelisa imivalo yentsimbi engenasici, uhlobo lomngxunya wokuqengqeleka ngokubanzi wamkela inkqubo yohlobo lomngxunya okweqanda. Xa uyila uhlobo lomngxunya, kuthathelwa ingqalelo ukuba uhlobo lomngxunya lunokuziqhelanisa okunamandla, kwaye uhlobo lomngxunya obuyiselweyo kunye nokuqalisa kwakhona kokugaya kuya kuncitshiswa, oko kukuthi, uhlobo lomngxunya lungaguqulwa kwiimveliso ezahlukeneyo, ukuvumela uhlobo lomngxunya ube nohlengahlengiso olukhulu lwesikhewu, ukuze uluhlu lwemveliso luphela ukunciphisa utshintsho kumngxunya wemingxunya lokusila kwangaphambi kokugqiba.
Ukulawula ulawulo lobushushu
Xa i-stainless steel iqengqiwe, ukuxhathisa kwayo kukungavumi kutshintsho lobushushu. Ingakumbi ekuqengqelekeni okurhabaxa, ngenxa yesantya esiphantsi sokuqengqeleka, ukunyuka kweqondo lobushushu okubangelwe ngumsebenzi we-deformation akwanele ukubuyisa ukwehla kweqondo lobushushu kwistokhwe esiqengqelekayo ngokwaso, kukhokelela kubume obukhulu beqondo lobushushu entloko ukuya ngomsila. Ukunyamezelana kwemveliso kunefuthe elibi kunye neziphene zomhlaba kunye neziphene zangaphakathi zinokwenzeka nakwisitokhwe esongiweyo, ezichaphazela ukufana kokusebenza kwemveliso yokugqibela. Ukulungiselela ukusombulula ezi ngxaki zingasentla, i-billet efudumeleyo iphantsi kokuqengqeleka okungagungqiyo, emva koko ingene kwisibasi (okanye igesi) esibambe iziko lomlilo okanye iziko lokuvuselela ubushushu elilahliweyo phakathi kokuqengqeleka okurhabaxa kunye nokuqengqeleka okuphakathi, kwaye iqondo lobushushu liyafana ngaphambi kokungena kwiyunithi yokuqengqeleka ephakathi. Ukuqengqeleka. Ukwenzela ukulawula ubushushu obugqithisileyo bamalungu aqengqelekileyo xa kugqitywa ukugqitywa kunye nokugqitywa kwangaphambili, isixhobo sokupholisa amanzi (itanki yamanzi) ngokubanzi sinikezelwa phakathi kweeseti ezimbini zokugaya kunye naphakathi kweendawo zokugaya. Ke ngoko, ulawulo olufanelekileyo lobungakanani beenkozo lunokufezekiswa ukuphucula ukusebenza kobuchwephesha kwimveliso yokugqibela.
Unyango olushushu kwi-Intanethi lwentsimbi engenasici
Kwixesha elidlulileyo, unyango lobushushu lweentsimbi zentsimbi lwenziwa ngaphandle kweintanethi. Ngophuhliso lwezenzululwazi kunye nzulu yophando inkqubo lothuli, unyango ubushushu steel stainless mihla nayo yenziwa online. Xa uvelisa ibha, yentsimbi ene-austenitic kunye ne-ferritic, akukho lula ukuvelisa ukuqhekeka okubandayo kunye nokuzikhomba ngokwakho, ukupholisa umoya okanye ukupholisa ukupholisa emva kokuqengqeleka, okanye isixhobo sokupholisa amanzi ngaphambi kokubhabha kwe-shear ukufezekisa ukucima ubushushu; imveliso Kwimeko yentsimbi ye-martensitic, kulula ukuvelisa ukuqhekeka okubandayo, kwaye akunakupholiswa ngokuthe ngqo ebhedini yokupholisa ngamanzi okupholisa. Isakhiwo sebhedi yokupholisa sahlukile kwibhedi ebandayo yokuvelisa intsimbi yekhabhoni. Enye indlela kukusebenzisa i-rack ephucukileyo. Ibhedi ebandayo, enje ngebhedi ebandayo yesityalo se-US Teledyne AIIvac, esenziwe nguDanieli e-Itali ngo-1989, siphume siye kwitanki kwicala lobushushu obuphezulu. Itanki inokugcwaliswa ngamanzi ukuntywilisela ibhedi ebandayo emanzini, ukwenzela ukuba kwenziwe intsimbi engenasinxibe e-austenitic. Ukucima amanzi, kodwa hayi ukucima amanzi, kungena ngqo kwindawo yokupholisa. Ibhedi yokupholisa nayo inokuxhotyiswa ngesikhuseli sokufudumeza ubushushu ukulibazisa ukupholisa isitokhwe esiqengqelekayo. Xa isiciko sokugquma sisetyenziselwa ukulibaziseka kokupholisa, iqondo lokupholisa sisiqingatha senqanaba lokupholisa lendalo. Izinga lokupholisa elisezantsi kubaluleke kakhulu ukuqinisekisa ukuba i-hysteresis brittle crack yentsimbi ye-martensitic; enye indlela yile: Yila isiqingatha sebhedi yokupholisa ibe luhlobo lwetyathanga, kwaye esinye isiqingatha yindawo yokupholisa yokulala. I-roller yokuhambisa ibonelelwa ngesimbozo sokugcina ubushushu. Xa i-martensite insimbi engenasici iveliswa, i-shears ezibhabhayo zisika isiqwenga esisongelweyo kwirula ephindwe kabini okanye ubude obuzinzileyo. Ukuba ngumlawuli ophindaphindiweyo, uhlobo lebhedi ebandayo ekhatywayo ikhutshelwa ngokukhawuleza kwisigubungelo sokugcina ubushushu, kwaye isikwe kwikhava kwikhava. Umlawuli emva koko uthunyelwa emhadini wokugqumeza ubushushu, kwaye irula esisigxina itsalwa ngokuthe ngqo kumhadi wokugquma ubushushu bokupholisa kancinci.
Egqithileyo Ibha ye-Angle yesinyithi
Okulandelayo: intsimbi ezinamacala Bar
Ubungakanani beBhari yeTshaneli
Ibha yeChannel yeeNqwelomoya